के तपाईको पैंताला चिसो भइराख्छ ? राति सुत्नुभन्दा अगाडि यो घरेलु विधि अपनाउनुस् – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/के तपाईको पैंताला चिसो भइराख्छ ? राति सुत्नुभन्दा अगाडि यो घरेलु विधि अपनाउनुस्
जाडो मौसममा शरीरमा चिसो गढेर सताउने गर्छ । त्यसमा पनि चिसो पैंताला हत्तपत्त नतात्दा निकै असहज हुन्छ । रक्त सञ्चार राम्रोसित नहुने व्यक्तिहरुमा पैंताला नतात्ने समस्या हुन्छ ।तपाईंको पैंताला त्यतिबेला चिसो हुन्छ, जब पर्याप्त अक्सिजनको अभावमा खुट्टामा रक्त सञ्चार कम हुन्छ । रक्त सञ्चार राम्ररी हुनासाथै शरीर फेरि तात्न थालिहाल्छ ।
लामो समयसम्म खुट्टा चिसो हुने समस्याले शरीरमा रक्तअल्पता, मुटुरोग, थाइरोइड, मधुमेह, खुट्टा काँप्ने रोग लगायतका समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ । खुट्टाको रङमा परिवर्तन आएमा, खुट्टाका मांसपेशी कडा भएमा, छालाका छिद्र खुलेमा, हातखुट्टा कडा भएमा, छोएको थाहा नभएमा तुरुन्तै चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।चिसो मौसममा यत्तिकै पनि सबैको हातखुट्टा चिसो हुन्छ । अझ त्यसमा कुुपोषण, अत्यधिक धूमपान तथा मद्यपानले पैंतालालाई चिसो बनाउन योगदान गर्छ । पैंताला निरन्तर चिसो भइरहेमा चिकित्सकको परामर्श लिनु उचित हुन्छ । अन्यथा, सामान्य अवस्थामा घरेलु उपचारले पनि समस्या निर्मुल गर्छ ।
– एउटा ठूलो भाँडामा तातो पानी हालेरमा त्यसमा ग्रीन टीको ३\_४ वटा ब्याग दश मिनेटसम्म भिजाउने । त्यो पानीमा करिब दश मिनेट खुट्टा डुबाएर राख्दा पनि चिसो पैंतालालाई राहत मिल्छ। एजेन्सीको सहयोगमा